ဦးရေခဲကြီးကို စိတ်ကောက်ရတဲ့အကြောင်းကို ဖတ်မိသူတိုင်း မပြုံးဘဲမနေနိုင်လောက်အောင် တဖွဲ့တနွဲ့ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Cele Zone
ဦးရေခဲကြီးကို စိတ်ကောက်ရတဲ့အကြောင်းကို ဖတ်မိသူတိုင်း မပြုံးဘဲမနေနိုင်လောက်အောင် တဖွဲ့တနွဲ့ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
အနေအေးတဲ့ ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့ ကလေးလိုသိပ်ချွဲတတ်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရှင် ဘဝဟာ ပျော်စရာအရမ်းကိုကောင်းခဲ့ပါ တယ်။ နှစ်ယောက်သားရဲ့ ချစ်စရာအကြောင်းလေးကို အမြဲလိုလိုပြောပြလေ့ရှိတဲ့သုသုဟာ ဒီနေ့မှာလည်း ” တစ်နေ့သောအခါ ဒေါ်သုတစ်ယောက် Apollo-13 ရုပ်ရှင်ကားကြီးကြည့်ပြီးသွားစဉ် ထုံးစံအတိုင်းဘေးမှာ i pad ရယ် ဖုန်းရယ် laptopရယ်ကြား အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ ဦးရေခဲဘက်သို့လှည့်၍ ”
” Boo Bear သိလား? သုသုကလေအခု Apollo13 ရယ် Martian ရယ် Gravity ရယ်ကြည့်ပြီး စဉ်းစားမိတာကလေ သုသုကိုလေ NASA ကလူတွေက spaceထဲကိုအလကားလိုက်ပို့ပေးမယ် ပိုက်ဆံမယူဘူးဆိုရင်တောင်မသွားဘူးသိလား Boo Bear ကိုပြန်မတွေ့ရတော့မှာကြောက်လို့ Boo Bear ကိုပါခေါ်လို့ရမှသွားမှာ Boo Bear ဆိုရင်ရောသုသုမပါဘဲ တစ်ယောက်တည်း သွားမှာလားဟင်” ဟုအင်မတန်မှချိုအီပစ်လဲနေသောအသံနှင့် မျက်တောင်လေးများ တစ်ဖျတ်ဖျတ်ခပ်၍ မျှော်လင့်ချက်များ ပြည့်နှက်နေသော ပြူးကျယ်ဝိုင်းစက်သည့် မျက်လုံးအစုံကိုဝင့်ကြည့်ပြီးမေးခွန်းထုတ်လိုက်စဉ် ”
” ဦးရေခဲက laptop screen မှမျက်နှာတစ်ချက်ပင်မခွာဘဲပြတ်သွားစွာ ဤသို့ဖြေချလိုက်ပေ သည် ” ဟမ် Spaceလား? ကျွန်တော် ကတော့သွားမှာ ကျွန်တော် Space ထဲကို ရောက်ဖူးချင်တယ် ” ဦးရေခဲရဲ့အဖြေအဆုံးတွင်ဒေါ်သု၏ နဂိုပြူးနေသောမျက်လုံးမှာ ထက်ဝက်ခန့်မှေးစင်းသွားပြီး မျက်စောင်းကိုဒိုင်းခနဲထိုး ” ဟွန့် ” ဟူသောမြည်တမ်းသံကိုပြု မရှိရှိတဲ့ဆံပင်တိုတိုလေးကို ဝဲကနဲ ဖြစ်အောင်လည်ပင်းအကြောညပ်မတတ်ခါပစ်လိုက်၍ ဦးရေခဲကိုကျောခိုင်းပစ်ကာ စိတ်ကောက်ခြင်းခရီးရှည်ကို စတင်လိုက် ပေ၏ (စိတ်ကောက်ခြင်း ကိုခရီးရှည်ဟု တင်စားရခြင်း မှာတကယ်လည်းစစိတ်ကောက်သည့်အချိန်မှစ၍ (၂၄) နာရီ အတွင်း မိမိစိတ်ကောက်နေကြောင်းကို ထိုလူကြီးရိပ်မိခြင်းအလျင်းမရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းကို မိမိကြိုတင်သိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေတော့သည် ” ဆိုပြီး ချစ်စဖွယ်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
Previous Article အရင်လိုလှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်သွယ်သွယ်လေးဖြစ်အောင် ကြိုးကြိုးစားစား ဝိတ်ချနေပြီဖြစ်တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
Next Article စတိုင်အပြည့်နဲ့ဗိုက်ကလေးပေါ်နေပြီး အိုက်တင်မျိုးစုံနဲ့ မုန့်စားနေတဲ့ သမီးလေးကိုကြည့်ပြီး အသည်းတွေယားနေတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်